के तानाबाना बुन्दैछन् प्रचण्ड ? - EKalopati
के तानाबाना बुन्दैछन् प्रचण्ड ?
काटमाण्डाैं । सत्ताको रापमा रूमलिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न राजनैतिक घटना र तानबाना बुन्नको लागि व्यस्त देखिन्छन् । उनी हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्न बालुवाटार पुगेका छन् ।
मंगलबार बिहान काटेश्वरमा माधव नेपालसँग भेट गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् । नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल विस्तारलगायतका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन् ।
गत आइतबार प्रतिनिधिसभामार्फत विश्वासको मत पाएका देउवा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । उनले कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई समेट्ने गरी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
नेता नेपालसँगको भेटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहभागी थिए । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र यादवले सरकारमा सहभागीताका लागि नेता नेपाललाई आग्रह गरेका थिए ।
Previous articleभारतमा रहेका नेपाली राजदूतको फोन ह्याक कसले गर्यो ?
Next articleरामोसलाई मन पर्छ मेस्सी